China Soft PVC Photo Frames fekitari uye vagadziri | SJJ
Soft PVC Photo Frame chishandiso chakanakisa chekuratidza hupenyu hwako hwakanaka kwete chete mumba mako kana padhesiki rako, asiwo mune dzimwe nguva sekuratidzira kana kuratidza. Inoitwa neyakareruka PVC zvinhu, zviri zveupfumi uye zvakatipoteredza. Hunhu hwakasimba hunobatsira kuchengetedza mafoto, kwete kutyora senge g ...
Soft PVC Photo Frame chishandiso chakanakisa chekuratidza hupenyu hwako hwakanaka kwete chete mumba mako kana padhesiki rako, asiwo mune dzimwe nguva sekuratidzira kana kuratidza. Inoitwa neyakareruka PVC zvinhu, zviri zveupfumi uye zvakatipoteredza. Hunhu hwakasimba hunobatsira kuchengetedza mafoto, kwete kutyora segirazi. Uye Soft PVC inorwisa-mvura kuchengetedza mifananidzo. Inogona kushandiswa kwenguva yakareba, hapana chikonzero chekuchinja kazhinji, kwete chete kuve nemhando dzese dzezvimiro uye mavara, iwo marogo anogona zvakare kugadzirwa nemwi. 2D kana 3D marogo anogona kugadzirwa pachidimbu chimwe chete, uye iwo akakura ruzivo ari kwauri. Kumisikidza magadzirirwo anonyanya kufadza munguva yemazuva ano, uye pasuru inogona kuve dzakasiyana kudzivirira mafuremu. Iine akasiyana ekutsigira chinongedzo mumakona akasiyana, iyo PVC Photo Frames inoratidza akasiyana maficha emifananidzo. Isu tinokwanisa kuburitsa zvinhu zvine mhando yepamusoro munguva pfupi yekugadzira nguva.
Colors: Inogona kufanana PMS ruvara
Kupedza: mavara maererano nezvaunoda
Zvakajairika Zvakabatanidzwa Sarudzo: YeMapuranga muridzi, PVC mubati, hapana chekubatira pakutsigirwa, chirauro uye nezvimwe.
Pashure: Yakapfava PVC Bhodhoro Inovhura
Zvadaro: Yakapfava PVC Wristbands & Bracelets